माओलाई किन मान्ने, कसरी मान्ने ? « Jana Aastha News Online
माओलाई किन मान्ने, कसरी मान्ने ?
प्रकाशित मिति : २४ पुष २०७३, आईतवार ०८:०३
१२४ वर्षअघि २६ डिसेम्बर सन् १८९३ मा हुनान प्रान्तको शाओसान गाउँमा जन्मिएका माओलाई चीनमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना (सन् १९२१) हुँदा संस्थापक सदस्य भए पनि मुख्य नेतृत्वमा पुग्न १४ वर्ष लाग्यो । सन् १९३५ देखि आजन्म सन् १९७६ सम्म आइपुग्दा ४१ वर्ष लामो समय मुख्य नेतृत्वमा रहनु चानचुने कुरा थिएन ।
४१ वर्षमा माओले तीनवटा महान् क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो । पहिलो सन् १९४९ मा सम्पन्न नयाँ (पुँजीवादी) जनवादी क्रान्ति । दोस्रो सन् १९५६ को आठौं महाधिवेशनबाट प्रस्तुत समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम ।
तेस्रो, सन् १९६६ देखि थालिएको सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति । सांस्कृतिक क्रान्तिको पूरा काम नसकिँदै माओको निधनले विश्व सर्वहारा क्रान्तिमा ठूलोे धक्का आइलाग्यो ।
सन् १९६६ देखि १९७६ सम्म सञ्चालित सांस्कृतिक क्रान्ति चीनमा २० वर्ष लामो बन्दुकको लडाइँभन्दा संसारलाई थर्काउने ठूलो उथलपुथलकारी क्रान्ति थियो । यसैले माओवादको विकासमा ठूलो भूमिका खेल्यो ।
विश्व सर्वहारा क्रान्तिका तीन कोसेढुंगामध्ये पहिलो पेरिस कम्युन थियो । सन् १८७१ मा पहिलोपटक बलप्रयोगद्वारा गरिएको क्रान्ति । यसले माक्र्सवादको विकासमा ठूलोे योगदान दियो । दोस्रो कोसेढुंगा, रुसमा लेनिनको नेतृत्वमा सम्पन्न सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्ति । तीन कोसेढुंगाबाहेक माओपछि कसैले पनि क्रान्तिको थप विकास गर्न सकिरहेको छैन ।
सन् १९४९ को नयाँ जनवादी क्रान्ति माओले चीनजस्तो अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती मुलुकमा रुसभन्दा मौलिक ढंगले सञ्चालन गर्दा सफल हुन सकेको हो । पेरिस कम्युनभन्दा अक्टोबर क्रान्ति नितान्त नयाँ र मौलिक थियो । रुस औद्योगिक पुँजीवादी मुलुक थियो भने चीन पिछडिएको कृषिप्रधान मुलुक । अर्कोतिर चीन थप जापानी साम्राज्यवादी मुलुकद्वारा उपनिवेशमा परेको बेला थियो त्यो । यस्तो मुलुकमा सर्वहारा क्रान्ति कसरी गर्ने भनेर माओको रुसी कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र मस्कोबाट प्रशिक्षित चिनियाँ कम्युनिस्टसँग लामो अन्तरसंघर्ष चल्यो । रुसभन्दा चीनको क्रान्ति नयाँ र मौलिक हुन्छ भन्ने माओ र रुसी मोडेलबाटै चीनमा पनि क्रान्ति हुन्छ भन्ने लिलिसान, वाङमिङ र छुछुपाईहरूसँगको लडाइँमा माओ आफ्नो मौलिक लाइनमा अडिग रहनु भयो । जसका कारण चीनमा क्रान्ति सम्पन्न हुन पुग्यो ।
माओबाट के सिक्ने ?
माओबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्छ नेपाल र विश्वभरका कम्युनिष्टले । खासगरी माओवादीले । माओको निधनपछि कतै पनि सर्वहारा क्रान्ति सफल हुन सकेका छैनन् ।
आजका माओवादीले सिक्ने कुरा त्यही मौलिक क्रान्ति नै हो । किनभने माओको निधनपछि बर्मा, मलाया, फिलिपिन्स र पेरुमा सञ्चालित जनयुद्ध कतै पनि सफल नहुनु बरु धक्का खान पुग्नुले बदलिएको विश्वमा फेरिएको परिस्थितिअनुरूप नयाँ राजनीतिक तथा फौजी रणनीतिको विकासको खाँचो देखिएको छ ।
नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध शान्तिप्रक्रियामा आएपछि व्यहोरेको धक्काबाट पाठ सिक्दै क्रान्तिकारी माओवादीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेतृत्वमा नयाँ क्रान्ति गर्न गइरहेका छन् ।
हरेक क्रान्तिको पुनरावृत्ति हँुदैन, विकास हुन्छ भनेजस्तै अबको नेपाली क्रान्तिको मोडल पनि मौलिक र नयाँ हुनै पर्छ ।
विश्वका धेरै नेताले एकै खालको क्रान्तिको नेतृत्व गरेका छन् । तर, माओले तीनवटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्नु चानचुने कुरा होइन । आज नेपालमा पहिलो क्रान्तिको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड, बाबुराम र किरणहरू बीच बाटोबाट पछि हट्न पुगे । प्रचण्ड र बाबुरामले त झन् नयाँ ढंगले क्रान्ति गर्ने नाममा जनयुद्धका सबै उपलब्धिलाई योजनाबद्ध रूपमा समाप्त पारेरै छाडे । जनयुद्धका मुख्य पुँजी जनसत्ता, आधारइलाका र विशाल जनमुक्ति सेना सबै ती दुई नेतृत्वको एकल ठाडो निर्देशनमा विघटन गरियो ।
माओजस्ता महान् नेताको नामबाट माओवादी साइनबोर्ड झुन्डाइरहेका प्रचण्डहरू इतिहासमा खलनायक बन्न पुगेका छन् । बाबुराम त झन् माओवादको कित्ताबाट धेरै टाढा भागेका छन् । यो भनेको माओको क्रान्तिकारी सिद्धान्तलाई परित्याग गर्दाको परिणाम हो । खासमा माओवादलाई दह्रो गरी समात्न नसक्नु र आत्मसात् गर्न नसक्नुको परिणाम हो ।
सांस्कृतिक क्रान्तिको मूल मर्म भनेको निरन्तर क्रान्ति हो । माओले माक्र्सवादका तीन संघटक अंग दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको क्षेत्रमा एकैचोटि विकास गरेर माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई समृद्ध र विकास गर्नुभयो ।
आफ्नो राजनीतिक जीवनकालमा माओले धेरै सिद्धान्तको विकास गर्नु भयो । त्यसमा मुख्यगरी सन् १९३८ मा प्रतिपादित दीर्घकालीन जनयुद्धको सिद्धान्त थियो । यीलगायत दर्शन क्षेत्रमा अन्तरविरोधबारे । राजनीतिक अर्थशास्त्रमा अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती समाजको आर्थिक विश्लेषण । अनि सबैभन्दा धेरै र सार्वभौम विचारको विकास माओले वैज्ञानिक समाजवादको क्षेत्रमा गर्नु भयो ।
आजको दुनियाँमा माओ र माओवादलाई आत्मसात् नगरी कोही पनि सच्चा कम्युनिष्ट हुन सक्दैन । माओवादी त झन् बन्नै सक्दैन । माक्र्स, लेनिन र माओ विश्व सर्वहारा क्रान्तिको विज्ञानमा सर्वाधिक योगदान गर्ने मुख्य कर्ताहरू हुनुहुन्छ । त्यसबाहेक माक्र्सका सहयोद्धा एंगेल्स, लेनिनका सहकर्मी स्टालिन र माओका सहकर्मी चौ एनलाइहरू पनि विश्व सर्वहारा क्रान्तिको विज्ञानमा कोसेढुंगा थप्ने हकदार हुनुहुन्छ ।
माओ र माओवादबिना आजको पुँजीवाद र संशोधनवादसँग लड्न सकिँदैन । माओवादबिना सर्वहारा क्रान्ति गर्छु भन्नु एउटा निशस्त्र मान्छेले आधुनिक हतियारबद्ध मान्छेसँग लड्छु भनेजस्तै हो ।
९० को दशकमा सोभियत कम्युनिष्ट सत्ताको विघटनसँगै विश्वबाट साम्यवाद असफल भयो भनेर हौसिएका पुँजीवादीहरू पेरुमा ८० को दशकको मध्यतिरबाट सञ्चालित क्रान्तिबाट त्रसित बन्न पुगे । त्यो क्रान्तिले पनि ९० को दशकको मध्यतिर धक्का खान पुग्दा पुँजीवादी पुनः रमाए । तर त्यही दशकको अन्त्यतिर सन् १९९६ (वि.सं २०५२) मा नेपालबाट शुरु भएको सर्वहारा क्रान्तिले विश्वभरिका श्रमजीवीलाई नयाँ उत्साह पैदा गरिदियो । नेपालको क्रान्ति आफ्नो मौलिकतासहित जीतको संघारमा पुगेको थियो । तर, त्यो क्रान्तिलाई प्रचण्ड र बाबुरामले नै हत्या गर्दाको परिणाम आज आन्दोलनले सेटब्याक खान पुगेको छ ।
प्रायः सबै माओवादी संसद्वादमा फर्किसके या फर्किंदै छन् । नेपालको सन्दर्भमा नेकपा माओवादीद्वारा विकास गरिएको एकीकृत जनक्रान्ति माओले प्रतिपादन गरेको दीर्घकालीन जनयुद्धकै विकसित विचार हो । यो एकीकृत जनक्रान्ति लेनिनको शहरी विद्रोह र माओको दीर्घकालीन जनयुद्धमा टेकेर विकास गर्न खोजिएको नितान्त मौलिक र नयाँ मोडेल हो । यो मोडल विकासको प्रक्रियामा छ । माओ र माओवादलाई स्मरण गर्नुको अर्थ माओका क्रान्तिकारी सिद्धान्तलाई आफ्नो मौलिकता र व्यवहारमा प्रयोग गर्नु हो ।